Tombony azo avy amin'ny fiantohana mivezivezy amin'ny Paska | Vaovao momba ny dia
Tombony azo amin'ny fiantohana fiantohana amin'ny paska
Susana godoy | | Fialan-tsasatra
Azo antoka fa nanomana ny zavatra rehetra ilainao amin'ny fialan-tsasatra manaraka ianao nandritra ny fotoana ela. Izao no fotoana ahafahana misintona andro vitsivitsy miaraka amin'ny fianakaviana iray manontolo ary manalavitra ny asa. Efa manana ny zava-drehetra ianao: ny tapakila, ny valizy ary ny nofinofy, saingy tsy tokony hohadinoinao maka fiantohana handeha mandritra ny Paka.
Satria imbetsaka isika dia malahelo ny ilaina indrindra. Ary koa, ao amin'ny a vanim-potoana avo Satria Paska dia tsara kokoa ny mamela ny zavatra rehetra mifamatotra tsara mba hahafahantsika mieritreritra ny mankafy ny tenantsika fotsiny. Noho izany, ilaina ny mahatadidy ny tombony rehetra, izay tsy vitsy, amin'ny fiantohana fiantohana amin'ny dia. Halahelo azy ireo ve ianao?
1 Fanampiana ara-pahasalamana rehefa mividy fiantohana amin'ny dia
2 Fanafoanana ny dia hatramin'ny iray andro mialoha izany
3 Hitahiry fotoana sy vola ianao amin'ny alàlan'ny fiantohana fizahan-tany
4 Inona ireo tranga mahazatra mety hitranga amin'ny Paka?
Fanampiana ara-pahasalamana rehefa mividy fiantohana amin'ny dia
Mazava fa rehefa mandeha manao dia lavitra isika dia tsy mieritreritra ny ratsy mety hitranga, fa ny mifanohitra amin'izay. Fa marina ihany koa fa na dia tsy tiantsika aza izy ireo dia zavatra mety ho tonga irery. Noho izany tsara kokoa raha mijery lavitra isika. Amin'ny fomba ahoana? Eny, ho voasarona tsara. Araka izany, maka antoka fiantohana manolotra fanampiana ara-pitsaboana rehefa lavitra ny sisintaninay izahay. Amin'izay ianao dia hanana tobim-pahasalamana tsara indrindra eo am-pelatananao, tsy manahy momba izay azonao atao. Noho izany, noho ireo politika isan-karazany misy eo amin'ny tsena, dia mila misafidy iray mifanaraka amin'ny filantsika fotsiny isika.
Fanafoanana ny dia hatramin'ny iray andro mialoha izany
Iray amin'ireo tombony hafa ananantsika raha ny amin'ny fiantohana ny fiantohana amin'ny dia. Na dia manana ny fiheverana rehetra noresahintsika tetsy ambony aza isika, dia marina ihany koa fa misy fisehoan-javatra tsy ampoizina hiseho. Noho izany, ny antony miasa sy ny fahasalamana dia mety hahatonga anao tsy hamela ny fialan-tsasatra sahaza anao. Fa raha manana fiantohana fanafoanana ianao, dia vao mainka hahazo aina ianao amin'ny fahafantarana izany ny dia dia azo foanana hatramin'ny iray andro alohan'io, nefa tsy very ny volanao. Betsaka ihany koa ny fiantohana izay hanarona anao raha, amin'ny antony manokana, dia manao dia ianao fa tsy maintsy miverina aloha.
Hitahiry fotoana sy vola ianao amin'ny alàlan'ny fiantohana fizahan-tany
Marina ilay hoe vidiny handoavanao ny fiantohanaHiankina amin'ny dia hataonao ihany koa izany. Fa na izany aza, dia handaitra foana izany satria miresaka fotoana manokana isika. Ho fanampin'izany, tsy maintsy mieritreritra ianao fa raha miresaka olana ara-pahasalamana mety hitranga rehefa vakansy isika dia mety ho lafo indroa ny fitsidihana dokotera raha tsy misy fiantohana. Indraindray isika dia mieritreritra fa amin'ny fiantohana ara-pahasalamana dia efa ananantsika ny zava-drehetra. Nefa na dia tsy maintsy havaozina isan-taona aza izany, miaraka amin'ny fiantohana dia hataonay mandritra ny fotoana ilain'ny vakansy izany.
Toy izany koa, ity farany dia hiatrika karazana tranga hafa ihany koa fa tsy ny fitsaboana ihany. Koa satria olan'ny fitaterana, miaraka amin'ny valizy ary koa toeram-ponenana ary fanafoanana izay mety hisy fiatraikany ratsy amintsika. Tsy noho ny andro fialan-tsasatra ihany fa noho ny fandaniana ara-bola mety hitranga rehefa tsy voasarona isika. Noho izany dia avo dia avo ny fitsitsiana vola. Na dia hitahiry fotoana aza isika, satria miaraka amina antso iray dia hanana ny fampahalalana rehetra ilaina isika.
Inona ireo tranga mahazatra mety hitranga amin'ny Paka?
Betsaka ny famindran-toerana miseho amin'ny Paka. Noho izany dia mety hisy tranga maro kokoa noho ny amin'ny vanim-potoana hafa. Ny sasany amin'ireo mahazatra indrindra dia mety:
Mila manafoana ny dianay amin'ny olana ara-pahasalamana. Samy noho ny aretina sy ny lozam-pifamoivoizana tsy nampoizina.
Very valizy. Zavatra mitranga matetika kokoa noho ny andrasantsika izany. Mety misy halatra na fatiantoka ary fanimbana mihitsy aza.
Fanafoanana ny sidina Ary koa ny fahatarana, toa izy ireo koa no iray amin'ireo antony matetika indrindra amin'ny Paska na rehefa hanomboka fialantsasatra isika.
Ho an'ity rehetra ity sy ny maro hafa, ny fiantohana fiantohana dia hanampy anay. Satria raha misy ny fanafoanana dia haverin'izy ireo ny vola. Toy izany koa, hanarona ireo karazana olana rehetra amin'ny valizy ary mazava ho azy ny fanampiana ara-pahasalamana, araka ny efa noresahintsika teo. Noho izany rehetra izany, ny tadiavinay dia ny ho tony foana ary saron-damosina ny lamosintsika mba tsy hanaitra karazana tsy ampoizina. Ary ianao? Efa manana ny anao ve ianao fiantohana handeha amin'ny Paka?.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialan-tsasatra » Tombony azo amin'ny fiantohana fiantohana amin'ny paska
Fetin'ny nosy grika
Tsidiho i Abu Simbel any Egypt